Le filimu "Madoda, abesifazane nezingane ': nabalingisi izindima
Le filimu isitshela indaba umndeni lapho ubuhlobo obuphakathi kwabazali nabantwana ingane bayahlolwa yesimanjemanje. Le filimu "Madoda, abesifazane nezingane ', nabalingisi abangekho izibalo odumile imboni yamabhayisikobho, okubonisa izinhlangothi zombili emihle nemibi we ubiquity nekufinyelela Inthanethi. Awakening omdala ofisa inkinga izingane zivama ukuxazulula ngokwabo, sibambe World Wide Web imithombo. Kwenzekani, niyazi, ngifuna ukuba ukuphela kwalesi ifilimu ezithakazelisayo futhi impikiswano.
Le filimu "Madoda, abesifazane nezingane ': nabalingisi izindima. Adam Sandler (indima - Don Truby)
Adam Richard Sandler wazalwa ngo-1966, ngo-September 9. Indawo yokuzalwa - New York. Ngisho esemncane okwaqala ithalente lakhe yosomahlaya. Wayevame ubungazwa nabo esikoleni nothisha, ukuhlela izethulo ezahlukene. Cishe, ngabe wahlala ngomdlandla, uma kungekhona umfowabo ka-Adamu, ngubani uyiqophe le imidwebo mncintiswano comedy. ukusebenza ngempumelelo, waba kwabasha nosomahlaya yokuvuma ku-TV. U-Adamu waba liyabonakala. wabonakala kubalandeli kuqala. Ngaphezu abasebenza imibukiso, Sandler Baqala ukwenza kumafilimu futhi baphishekela solo umculo umsebenzi. Ukuze albhamu yabo Ubathola Zonke Gonna Laugh at Wena, yena waba ngisho abaphakanyiselwe "Grammy" umklomelo. Futhi iqhaza "Coneheads" udumo lwakhe njengoba umculi.
Adam Sandler, ngempela omunye nabalingisi ethandwa kakhulu esikhathini sethu. Okokuqala, yena ayesezichachazela ahlekisayo uchwepheshe. Kodwa credit wakhe, kukhona izindima sina. Le filimu "Madoda, abesifazane nezingane ', nabalingisi izindima kuthi baba nendima isikhathi eside kwaba isihloko Film Abagxeki. Isithombe isibe oyedwa Sandler sika amadrama ambalwa ayelayo ukudlala. Adam iminyaka 7 wahlangana imodeli nomlingisikazi Dzheki Titon. Ngo-2003, lo mbhangqwana washada. Ukunqoba lugujwe nodwendwe okukhulu. Inani izivakashi kudlulwe abantu 400.
Dzhenifer Garner (indima - Patricia Beltmeyer)
Lokhu-Hollywood actress ubhekwa nabesifazane abahle kakhulu eMelika. Wazalelwa 1972, ku-17 Apreli. Ngiseyingane, ngesikhathi ekufuna abazali bakhe watadisha ballet nomculo nokwenza kwakhe unesithakazelo kuphela eminyakeni yakhe umfundi. Khona-ke wamenywa ukuba indima eyinhloko esithombeni enkundleni yemidlalo yase-Denison University, lapho Jennifer wathola ubungcweti uthisha wesayensi yokuthakwa kwamakhemikhali. Kamuva, kuyoba ukuhumusha noMnyango nkundla futhi wazinikela ngokuphelele ekufundiseni oyibamba.
Impumelelo ku Jennifer azenzekanga ngokushesha. Sekuyisikhathi eside Wayengummeli uweta parallel iqhaza e okuku eziningi. iminyaka Khona ambalwa okuqukethwe nge izindima episodic e osezingeni eliphasi ogawuthola. Bebaningi abantu actress yazuza emva ukuqopha umbukiso "Injabulo", lapho wadlala uHana. Kwaba uye waqaphela futhi baqala ukumema ngaphezulu amaphrojekthi eliphezulu. Ngokushesha actress nendima enkulu kule lezinkanyezi "Alias" uchungechunge TV, okuyinto kwaletha impumelelo yakhe ngamazwe.
Uneziqu lenqwaba izindima emafilimini izinhlobo ezehlukene. Lokhu "daredevil," "13 Eqhubekela phambili 30," "Elektra", "Madoda, abesifazane nezingane."
Abalingisi abesebenze Jennifer, njalo uphawu wakhe ngokuzimisela, ubuqotho nokusebenza ngokuzikhandla ukuthi libonisa isethi. Ngo-2001, Garner washada Scott Foley. Bobabili ezimpini ukuthwetshulwa uchungechunge TV. Kodwa umshado sahlukana ngemva kweminyaka 2. Manje actress isivele engu-12 beshadile futhi bejabule ukuze Benom Afflekom. Lo mbhangqwana banezingane ezintathu. Naphezu amahemuhemu okuvela yesehlukaniso inkanyezi pair, aziyi ndawonye.
Rozmari Devitt (indima - uHelen Truby)
Lokhu actress kuyinto umzukulu lo boxer edumile emhlabeni wonke James Braddock. On sengathi yathathwa movie "Cinderella Man," lapho Rosemary odlale indima enkulu. Ukulingisa ithalente, le ntombazane iqala ukuvela eminyakeni esikoleni, lapho abantwana bakwa-isigaba ihlelwe netiyetha ukumaka ngamaholide ahlukahlukene. Ngemva kokuqeda isikole, wabhalisela ekolishi at Hofstra University, lapho ethola iziqu ze-Bachelor wakhe Wezobuciko degree. Lokhu actress uye wahlanganyela eziningi ezenziwe on Broadway. Futhi ngenxa inombolo yayo enkulu imisebenzi ochungechungeni: "Madoda Mad", "yezingxoxo", "Ngisindise," "Law and Order", "uMenzi" nokunye ..
I-movie enkulu Rosemary yaqala ukubonakala kakade lapho usukhulile. "URachel ukushada," Ngo-2008, wathatha nengxenye emsebenzini Umdwebo. Ngokweseka umdlalikazi ifilimu, yena waklonyeliswa imiklomelo eziningana ehlonishwayo. Liphinde yisibonelo esikhazimulayo ukusebenza eyisibonelo indima Umsebenzi wakhe e ifilimu "Madoda, abesifazane nezingane." Abalingisi like Rozmari Devitt akuvamile ingafeza lukhulu. Kodwa umsebenzi wabo futhi ngemuva zihlale acacile nangenakulibaleka. Ngo-2009, washada umlingisi Ron Lingvistona. Umbhangqwana kumelwe i indodakazi yokutholwa, ogama lakhe lalingu-Gracie, uJames.
Dzhudi Grir (indima - Donna uClint)
UJudith Laura Evans wazalwa ngomhla ka-July 20, 1975 eDetroit. Kwaphela isikhathi eside ezenza umsebenzi esikoleni somdanso we-ballet futhi kamuva iziqu ohlonishwa yaseshashalazini izifundo at DePaul University. Yena waba nenhlanhla ukuthola indima yokuqala cishe ngosuku olulandelayo ngemva kokuthweswa iziqu. Kwakuyisikhathi ahlekisayo "Kiss benza-bakholwe." Nakuba indima yakhe kwaba ezincane, kodwa kwaba ngokuba Judith ithikithi Hollywood. Phakathi neminyaka embalwa eyalandela ayifeza phezu 10 amafilimu: "Three Kings," "Jawbreaker," "ubuhle Ekhathazeke kakhulu," "Yini Abesifazane Want", njll Kusukela izindima lokugcina yesiteleka kakhulu iyona umsebenzi ifilimu "Idlala i Ugcina", lapho kuye. waba umngane Dzherard Batler.
Umyeni actress kusukela 2011 ingumkhiqizi Din Dzhonson. Dzhudi Grir siyaqhubeka ngempumelelo anqobe Hollywood. Ngo-2014, yena uvele ifilimu "Madoda, abesifazane nezingane." Abalingisi bathi, naphezu kweqiniso lokuthi yena umfazi umkhiqizi odumile, uJudy akazange asebenzise uxhumano wakhe ukuze athole indima, kodwa engekho akufezi uqobo kuphela.
Dean Norris (indima - Kent Mooney)
Abadlali of the ifilimu "Madoda, abesifazane nezingane 'anesizotha kuwo wonke umhlaba kuyaziwa izibalo cinema kanye yaseshashalazini. Dean Dzhozef Norris - iyathinteka. Wazalwa ngo-1963 edolobheni elincane eNingizimu Bent, Indiana. Esikoleni, bathi wayeyingane efana nezinye umfundi omuhle kakhulu. A kokuthola imfundo yesibili langena ngqo enyuvesi ezimbili: waseHarvard College futhi R.A.D.A .. Waziwa umbukeli e eziningi eziyimpumelelo TV uchungechunge oluthi "X-Files," "Lost," "Ukundindizela," "Breaking Bad," "Ngaphansi Dome". Lo mlingisi nomkakhe Bridget izingane ezinhlanu. Umndeni uhlala eCalifornia.
Okunye abadlali. "Madoda, abesifazane nezingane '
Futhi kulesi sithombe ungabona Emma Thompson, uThimothewu Chalameta, Olivia Krochikkya, UKaitlyn Dever, Ansel Elgort, Elena Kampuris, uDavide Denman, uWilliam Peltz nokunye. D. isithombe "Madoda, abesifazane nezingane ', lapho abadlali ngokuvamile kudlalwa ibeke indima, ngokuvumelana izethameli eziningi, kuveza umbono okuxubile. Kodwa-ke, kuyoba usizo ukuba abheke abazali izingane sengane.
Umlingisi Dzho Viterelli: Biography, ukuphila siqu, amabhayisikobho engcono
The best amahlaya-Korean
Brayan Ostin Green (Brian Austin Green): Filmography, biography, empilweni yakho
Amabhayisikobho best ephathelene neMpi Yezwe II
Kungani washiya Shannon Doherty kusukela "Enchanted"? Izizathu isenzo
Alexander Dedyushko - Filmography. The movie kangcono umlingisi
Yaroslavna sika sithombe "Lay", elidala Russian esekhona yeqhawe
Izilwane kwamahlathi okuxubile. izilwane ejwayelekile kwamahlathi okuxubile
Recipe inyama ophaya
Isivumelwano Selayisensi e isofthiwe
"Tivortin": yokusetshenziswa. "Tivortin": ukubuyekezwa, intengo, incazelo
Medlar. Kuyini lokhu izithelo ezimangalisayo?
Tomato sauce for meatballs: ukupheka indlela
Cabanga flooring noma laminate yini kangcono